ဒါဏ္ရာေတြ နဲ႔ လဲက်တဲ့ အခါတိုင္းျပန္ဆြဲ ထူေပးမယ့္ လက္တစ္စုံ မရွိခဲ့တာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ခဲ့ၿပီ ဆိုတဲ့ သားညီ – Let Pan Daily
ဒါဏ္ရာေတြ နဲ႔ လဲက်တဲ့ အခါတိုင္းျပန္ဆြဲ ထူေပးမယ့္ လက္တစ္စုံ မရွိခဲ့တာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ခဲ့ၿပီ ဆိုတဲ့ သားညီ
ပရိသတ္ႀကီးေရ ျပည္သူခ်စ္ အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ အကယ္ဒမီ မင္းသားႀကီးေဒြးကေတာ့ အားလုံး ကိုႏႈတ္ဆက္ထြက္ခြါသြားတာ ဆယ္စုႏွစ္ေက်ာ္ေနၿပီပဲျဖစ္ ပါတယ္။ သူသာသက္ရွိ ထင္ရွားရွိေနအုံးမယ္ဆိုရင္ မေန႔ကေမလ(၇)ရက္ေန႔ေလး က သူ႔ရဲ႕ (၅၄)ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔ျဖစ္ မွာပါ။
သူ႔ရဲ႕ေမြးေန႔ေလး မွာေတာ့ ညီျဖစ္သူ သားညီက အတူရွိခဲ့တဲ့အခ်ိန္ေတြ ကို လြမ္းဆြတ္သတိရေနေၾကာင္းကို သူ႔ရဲ႕လူမႈကြန္ရက္ကေန ရင္ဖြင့္လာခဲ့ပါတယ္။သားညီကေတာ့ “ အခုလိုညမ်ိဳးမွာျပင္ဦးလြင္ သီရိျမန္မာHotel ထဲက မီးပုံပြဲေလးကို သတိရတယ္ …ညီအစ္ကိုႏွစ္ေယာက္ ဂစ္တာတူတူတီးၿပီး သီခ်င္းေတြ အားရပါးရဆိုခဲ့တာေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ဘယ္လိုထင္ခဲ့မိမွာလဲေနာ္ …လြမ္းတယ္ အစ္ကို !!!
ဒါဏ္ရာေတြနဲ႔ လဲက်တဲ့အခါတိုင္းျပန္ဆြဲ ထူေပးမယ့္ လက္တစ္စုံ မရွိခဲ့တာ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုေက်ာ္ ခဲ့ၿပီ …အခ်ိန္ေတြကေတာ့ ေ႐ြ႕ေနမွာပါၾကာရင္ေမ့တတ္ၾကတယ္ ဆိုေပမယ့္ကြၽန္ေတာ့အတြက္ေတာ့တစ္ခ်ိဳ႕အရာေတြကမေန႔ တစ္ေန႔ ကလိုပါပဲဗ်ာ …သားညီ …”ဆိုၿပီးေရးသားထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ႀကီးေရ လူသာေသေပမယ့္ နာမည္မေသတဲ့ မင္းသားႀကီးေဒြး ကိုေတာ့ အားလုံးရင္ထဲမွာ ယေန႔ ထိတိုင္ေအာင္ မေမ့ႏိုင္ၾကေသး ပါဘူးေနာ္။
ဒါဏ်ရာတွေ နဲ့ လဲကျတဲ့ အခါတိုင်းပြန်ဆွဲ ထူပေးမယ့် လက်တစ်စုံ မရှိခဲ့တာ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ခဲ့ပြီ ဆိုတဲ့ သားညီ
ပရိသတ်ကြီးရေ ပြည်သူချစ် အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အကယ်ဒမီ မင်းသားကြီးဒွေးကတော့ အားလုံး ကိုနှုတ်ဆက်ထွက်ခွါသွားတာ ဆယ်စုနှစ်ကျော်နေပြီပဲဖြစ် ပါတယ်။ သူသာသက်ရှိ ထင်ရှားရှိနေအုံးမယ်ဆိုရင် မနေ့ကမေလ(၇)ရက်နေ့လေး က သူ့ရဲ့ (၅၄)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ် မှာပါ။
သူ့ရဲ့မွေးနေ့လေး မှာတော့ ညီဖြစ်သူ သားညီက အတူရှိခဲ့တဲ့အချိန်တွေ ကို လွမ်းဆွတ်သတိရနေကြောင်းကို သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေ ရင်ဖွင့်လာခဲ့ပါတယ်။သားညီကတော့ “ အခုလိုညမျိုးမှာပြင်ဦးလွင် သီရိမြန်မာHotel ထဲက မီးပုံပွဲလေးကို သတိရတယ် …ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက် ဂစ်တာတူတူတီးပြီး သီချင်းတွေ အားရပါးရဆိုခဲ့တာနောက်ဆုံးအကြိမ် ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ဘယ်လိုထင်ခဲ့မိမှာလဲနော် …လွမ်းတယ် အစ်ကို !!!
ဒါဏ်ရာတွေနဲ့ လဲကျတဲ့အခါတိုင်းပြန်ဆွဲ ထူပေးမယ့် လက်တစ်စုံ မရှိခဲ့တာ ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုကျော် ခဲ့ပြီ …အချိန်တွေကတော့ ရွေ့နေမှာပါကြာရင်မေ့တတ်ကြတယ် ဆိုပေမယ့်ကျွန်တော့အတွက်တော့တစ်ချို့အရာတွေကမနေ့ တစ်နေ့ ကလိုပါပဲဗျာ …သားညီ …”ဆိုပြီးရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးရေ လူသာသေပေမယ့် နာမည်မသေတဲ့ မင်းသားကြီးဒွေး ကိုတော့ အားလုံးရင်ထဲမှာ ယနေ့ ထိတိုင်အောင် မမေ့နိုင်ကြသေး ပါဘူးနော်။
လုံးတင်း နေတဲ့ အတွင်းအလှတွေ ကို ဆက်ဆီကျကျ ထုတ်ပြလိုက် တဲ့ မော်ဒယ် အိန်ဂျယ်ကို ရဲ့ အမိုက် စား ပုံရိပ်များ
ကိုရီးယားထမင်းလိပ်တွေ လုပ်ပြီး ပြည်သူတွေ အတွက် အာဟာရဒါန အဖြစ် လှူဒါန်းမှုတွေ ပြုလုပ်နေတဲ့ ပြည့်ဖူးခိုင်